Shiinaha warshad lapel musmaarradii Lapel iyo saarayaasha | Kingtai
Suuraddu waa sharraxaad yar oo leh hal ama in ka badan oo siddooyin bood ah, ama silsilad yar, oo ka laalaadda calaamadda birta weyn.
Dangle waa biin aad u xiiso badan. Waxaan u habeyn karnaa qaabka, cabbirka, qaabeynta iyo kaabayaasha pin lapel,
Qeexitaannada dhalooyinka dhaldhalaalka adag ee dhaldhalaalka ah: sidoo kale loo yaqaan "cloisonne," waa midka ugu caamsan wuxuu leeyahay dhalaal sare iyo adkeysi ku dayasho biinanka dhaldhalaalka adag ee dhaldhalaalka ah: mid ka mid ah biinanka ugu caansan, oo sidoo kale loo yaqaan EPOLA oo leh fiilooyin bir khafiif ah ayaa kala saari kara biinanka midab kasta oo la soo saaray biinanka jilicsan ee dhaldhalaalka jilicsan: qaabka ugu caansan, qaar badan oo ka mid ah faa'iidooyinka isku midka ah ee dusha sare ee cloisonne, qiimaha waa mid aad u sarreeya.
Bixis iyo biinanka shaashadda shaashadda: Nidaamka ugu dhakhsaha badan ee loo qaabeeyo astaamo ama biinano isku muuqaal ah. Sawir etch lapel pin: doorashada ugu fiican ee naqshadeynta cabbirka ballaaran ama flash Mosaic.
Waxaa loo heli karaa biinanka kale sida is riixriixida, wareejinta, laalaabka, bobbing, bilig bilig ama biinanka dhaqaaq ee biinanka
Biinanka daboolka xiddigta ayaa diyaar u ah inay doortaan maaddada, midabka iyo cabbirka aad u baahan tahay. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaad ku qanacsan tahay oo aad xiran doonto kaarkaaga khaaska ah ee sudhan!
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay kuxiran yihiin jaantuska shaashadda qalabka sida loo dalbado sababta loo doorto midkayaga laalaada
Noo soo dir nashqaddaada iyo astaanta shirkadda, mashruucani waa waxa ay tahay inaad isku daydo!
Qalabka Dangle Lapel Custom oo leh farshaxan farshaxan oo kuu gaar ah. Bixi xulashooyin wax soo saar oo buuxa oo la heli karo. Haddii aad u baahan tahay dhaldhalaalka adag ama dhaldhalaalka jilicsan, daabacaadda daabacaadda daabacaadda digtal, shaabadaysan ama wax kasta oo kale ayaannu dhammaantayo wada qabannaa. Wax walba waa suurtagal. Qiimaynta tooska ah ee warshad dhab ah.
Hore: 3D Lapel pin
Xiga: Dhimashada pinel pinel
Khatar Lapel Pin